Portugal, Suède ary Kanada ny ankamaroan'ny firenena fitsangatsanganana tia LGBT
Home » LGBTQ » Portugal, Suède ary Kanada ny ankamaroan'ny firenena fitsangatsanganana tia LGBT
Febroary 25, 2019
Noho ny fanatsarana ara-dalàna ny olona trans sy intersex ary koa ny hetsika fanoherana ny fankahalana fankahalana, i Portugal dia sambany nahavita nitsambikina avy eo amin'ny laharana faha-27 ka hatrany an-tampon'ny SPARTACUS Gay Travel Index, ary mizara ny laharana voalohany amin'i Suède sy Canada .
Ny SPARTACUS Gay Travel Index dia havaozina isan-taona mba hampahafantarana ny mpandeha ny toe-javatra misy ny lesbiana, pelaka, bisexual ary transgender (LGBT) any amin'ny firenena sy faritra 197.
Iray amin'ireo kintana vao misondrotra amin'ity taona ity i India, izay, noho ny fanavakavahana ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy ary ny toetr'andro ara-tsosialy nihatsara dia nisondrotra tamin'ny 104 ka hatramin'ny 57 tao amin'ny Travel Index. Tamin'ny taona 2018 dia nofoanana tany Trinidad sy Tobago ary Angola ihany koa ny fanaovana heloka bevava amin'ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy.
Tamin'ny fanekena ara-dalàna ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy, Austria sy Malta dia afaka nahazo toerana ambony eo an-tampon'ny SPARTACUS Gay Travel Index 2019.
Saingy niharatsy ny toe-draharaha ho an'ireo mpandeha LGBT any Brezila, Alemana ary Etazonia. Ao Brezila sy Etazonia, ny governemanta mpandala ny elatra havanana dia nanolotra hetsika hialana amin'ny zon'ny LGBT tratra taloha. Ireo fihetsika ireo dia nanjary nitombo ny herisetra homophobic sy transphobic. Nisy ihany koa ny fitomboan'ny herisetra mihatra amin'ny olona LGBT any Alemana. Ny lalàna maoderina tsy ampy mba hiarovana ny olona transgender sy intersex ary koa ny tsy fisian'ny drafitr'asa manohitra ny herisetra homophobic dia nahatonga an'i Alemana nilatsaka tamin'ny toerana faha-3 ka hatramin'ny faha-23.
Ireo firenena toa an'i Thailand, Taiwan, Japan ary Suisse dia eo ambany fanaraha-maso manokana. Antenaina hihatsara ny toe-draharaha amin'ny taona 2019 vokatry ny adihevitra momba ny fametrahana lalàna hamoahana ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. Thailand dia efa namindra toerana 20 hahazoana laharana 47 noho ny fampielezan-kevitra manohitra ny homophobia sy ny fametrahana lalàna hanaiky ny fiaraha-miasa amin'ny samy lahy na samy vavy. Ny fanolorana sahady ny lalàna momba ny fanambadian'olon-droa dia mety hahatonga an'i Thailandy ho toerana fitsangatsanganana be mpitia indrindra LGBT any Azia.
Any Amerika Latina, niteraka fanapahan-kevitra ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera Amerikanina misahana ny zon'olombelona (IACHR / CIDH) mitaky saika ny ankamaroan'ny firenena amerikana latina hanaiky ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy. Hatreto aloha, ny fanambadian'ny lahy samy lahy dia ara-dalàna ihany any amin'ny firenena any Arzantina, Colombia, Brezila, Uruguay ary any amin'ny fanjakana tsirairay any Mexico.
Ny sasany amin'ireo firenena mampidi-doza indrindra ho an'ny mpandeha LGBT amin'ny taona 2019 dia misy an'i Arabia Saodita, Iran, Somalia ary ny Repoblika Chechen any Russia, izay anenjehana olona maro ny firaisan'ny samy lehilahy na vehivavy ary atahorana ho faty.
Ny SPARTACUS Gay Travel Index dia natsangana tamin'ny fampiasana critère 14 amin'ny sokajy telo. Ny sokajy voalohany dia ny zon'olom-pirenena. Anisan'izany ny fanombanana raha avela hanambady ny pelaka sy ny lesbiana, na misy lalàna manohitra ny fanavakavahana, na raha mitovy taona na fanekena dia mihatra amin'ny mpivady heterosexual na homosexual. Izay fanavakavahana dia voarakitra ao amin'ny sokajy faharoa. Anisan'izany, ohatra, ny fameperana ny fivezivezena ho an'ny olona mitondra ny otrikaretina VIH sy ny fandraràna ny filaharam-be na fihetsiketsehana hafa Ao amin'ny sokajy fahatelo, tombana ho an'ny olona ny fanenjehana, sazy an-tranomaizina na fanasaziana lehibe. Ny loharanom-baovao voamarina dia ahitana ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona “Human Rights Watch”, ny fampielezan-kevitry ny ONU “Free & Equal”, ary ny fampahalalana mandavantaona ny fanitsakitsahana zon'olombelona an'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBT.
Taj Cape Town dia mandray ny Manager Marketing vaovao
Saint Martin / Sint Maarten dia mandray seho isam-paritra isan-taona amin'ny Mey